كولورادو WIC NP | JPMA، Inc.
عرض هذا باللغة الإنجليزية
IC WIC क्लिनिकमा फोन गर्नुहोस् यदि:
IC WIC खाद्यहरू वा रकमहरूबारे प्रश्नहरू छन् भने।
IC लागेको WIC स्वीकृत खाद्य तपाईँले किन्न सक्नुभएन भने।
तपाईँको कार्ड हरायो ، चोरी भयो वा बिग्रियो भने
1-844-234-4950 मा स्वचालित फोनलाइनमा फोन गर्नुहोस् यदि ...
पर्छ मेरो कार्ड हरायो वा चोरी भयो भने मैले के गर्नु पर्छ?
IC आफ्नो पिन परिवर्तन गर्नुहोस् ، अनि तुरुन्तै आफ्नो स्थानीय WIC कार्यक्रममा फोन गर्नुहोस्। उनीहरूले अरूलाई तपीँको खाद्य लाभहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्नेछन् र तपाईँलाई नयाँ कार्ड दिलाउन मद्दत गर्नेछन्।।
IC कार्डको पछाडि पट्टि भएको टोल फ्रि नम्बरमा वा स्थानीय IC IC IC फोन फोन गर्नुहोस्।
WIC कार्यालयमा लोड गरिएका खाद्य लाभहरू तुरुन्तै उपलब्ध हुनेछन्। W महिनाहरूका लागि खाद्य लाभहरू W eWIC कार्डमा सुरु मितिको मध्यरातमा राखिनेछ अन्तिम अन्तिम मितिको मध्यरातमा ती सकिनेछन् सकिनेछन्।
W eWIC कार्ड जोगाएर राख्नुहोस्! IC सम्पूर्ण WIC खाद्यहरू खरीद गरिसकेपछि पनि، तपाईँको कार्ड पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँका लाभहरूको आगामी सेट त्यही कार्डबाट खरीद गरिनेछ।
यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अरू कसैलाई किनमेल गराउन सक्नुहुन्छ। W उनीहरूलाई आफ्नो eWIC कार्ड र पिन दिन सक्नुहुन्छ। तर सो व्यक्ति विश्वासपात्र भएको कुरा निश्चित गर्नुहोस्!
अहँ ، प्रयोग नगरिएका लाभहरू अन्तिम मितिमा सकिन्छन्।
एनफ्यामिल कहाँ किन्ने؟
आफ्नो वर्तमान लाभहरू हेर्नका लागि WICShoppere एपमा "मेरा लाभहरू (مزاياي)" विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
किराना स्टोरको क्यासियरलाई भेट्नुहोस् वा आफ्नो ब्यालेन्सको प्रिन्ट आउट लिनका लागि ग्राहक सेवा डेस्कमा जानुहोस्।।
W बुझ्नका लागि आफ्नो eWIC कार्डको पछाडि रहेको टोलफ्रि नम्बरमा फोन गर्नुहोस्।
आफ्नो ब्यालेन्स हेर्न र प्रिन्ट गर्नका www.ebtedge.com मा जानुहोस्।
W eWIC कार्डबाट किनमेल गर्ने
W सुरुमै आफ्नो eWIC कार्ड स्वाइप गर्नुहोस्।
IC खाद्य घटाइनेछ रकम र तपाईँले खरीद गरेका फलफूल र सागसब्जीहरूको डलर तपाईँको IC IC IC IC IC IC IC
क्यासियरले तपाईँलाई एउटा रसीद दिनेछन् जसले बाँकी लाभको ब्यालेन्स र लाभहरू सकिने मिति देखाउनेछ।।
W कुनै किसिमको भुक्तानीका लागि W eWIC कार्ड स्वाइप गर्नुहोस्।
EB रहेको कुनै पनि ब्यालेन्स नगद ، EBT ، SNAP वा भुक्तानीको अन्य रूपबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ
IC चार अङ्कको गोप्य सङ्ख्या हो ، जसले कार्डसँग ، IC WIC लाभहरूमा पहुँच राख्न दिन्छ। पिन छनोट गर्दा ، सम्झिन सक्ने सङ्ख्या छनोट गर्नुहोस् ، तर त्यो अरूले पत्ता नलगाउने किसिमको होस् (उदाहरणका लागि तपाईँको तपाईँको आमाबाबु बच्चाको जन्ममिति)।)।
आफ्नो कार्ड प्रयोग नगरोस् भन्ने लागेको व्यक्तिलाई पिन नदिनुहोस्। भने कसैले तपाईँको पिन जान्दछ र तपाईँको अनुमति बिनै लाभहरू लाभहरू लिनका लागि तपाईँको कार्ड कार्ड गर्दछ भने भने، ती लाभहरू प्रतिस्थापित हुँदैनन्।
भने मैले मेरो पिन बिर्सिएँ वा परिवर्तन गर्न चाहेँ भने?
W eWIC कार्ड पछाडि भएको टोलफ्रि नम्बरमा फोन गर्नुहोस्।
आफ्नो पिन अनुमान गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। भने चौथो प्रयाससम्म पनि सही पिन एन्टर गरिएन भने، तपाईँको पिन लक हुनेछ। तपाईँको पिन अनुमान गरेर तपाईँका खाद्य लाभहरू प्राप्त गर्न खोज्नेहरूबाट सुरक्षा गर्न त्यसो गरिएको हो।। आफ्नो कार्ड अनलक गर्नका लागि मध्यरात सम्म कुर्नुहोस्، तपाईँको अकाउन्ट स्वत: अनलक हुनेछ।